देशका विभिन्न ७२८ स्थानमा डढेलो फैलिँदै, कुन जिल्ला कति प्रभावित ? मृत्यु हुनेको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन हुने क्रम जारी – Khabar Patrika Np
देशका विभिन्न ७२८ स्थानमा डढेलो फैलिँदै, कुन जिल्ला कति प्रभावित ? मृत्यु हुनेको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन हुने क्रम जारी
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र २३, २०७७ समय: ११:५३:१३
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय नै मानिसको ज्यानै लिने डढेलो फैलिँदै गएको छ । विभिन्न वन क्षेत्रमा बढ्दो क्रममा रहेको डढेलोबाट मृत्यु हुनेको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन हुने क्रम जारी छ । मानिसको ज्यान लिने गरी २०६६ सालमा नेपालमा डढेलो लागेको थियो ।
त्यो बेला ४९ जनाको यसरी नै आगो निभाउने क्रममा ज्यान गएको थियो । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वैशाख यता हालसम्म दुई हजार ३१३ वटा डढेलो सहितका भौतिक आगलागीका घटना भएका छन् । जसमा परेर ८६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
ती घटनामा परे ३५५ जना घाइते भएका छन् । यी घटनाका कारण एक अर्ब ७० लाख रुपियाँभन्दा बढीको नो सान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पानी परेपछि करिब तीन दिन मत्थर भएको डढेलो र आगलागी पुनः बढेको हो ।
वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वन तथा भू–संरक्षण विभागको वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीका अनुसार विगत २४ घण्टायता देशका ७२८ स्थानमा डढेलो र आगलागी भएका छन् । डढेलोबाट ७७ जिल्लामध्ये ६० जिल्ला प्रभावित बनेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै कञ्चनपुरमा २५, मकवानपुरमा २१, पर्सामा १७, जाजरकोटमा १६, अर्घाखाँचीमा १५, खोटाङ र अछाममा १३/१३, दैलेख र कपिलवस्तुमा १२/१२, नवलपुरमा ११ र सिन्धुलीमा १० स्थानमा डढेलो लागेको छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्माका अनुसार अबको डेढ महिना नेपाल डढेलोको उच्च जोखिममा छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।